Iska ilow Kylian Mbappe - Mucjisada Goolasha
Kylian Mbappe wuxuu ahaa laacibka ugu daqliga badan PSG hadana wuxuu kamid yahay weeraryahanada iyo xidigaha ugu fiican aduunka, laakiin waxaa jira mucjisooyin kale oo soo ifbaxay iyagoon wax aqoon ah lahayn. Hadafkiisa waalan.
Kooxda reer France oo haysata Neymar, Mbappe, Di Maria iyo Icardi ayaa ah gooldhaliyayaashooda ugu sareysa, waxay sugayaan ciyaaryahan kale oo mustaqbal weyn leh, rikoorkiisa gooldhalinta ayaa ka sareeya kan kale.
19 jirkaan ayaa amaah ugu ciyaara kooxda Lens wuxuuna dhaliyay 60 gool labo sano gudahood isagoon dhamaysan xilli ciyaareedkiisii ​​labaad.
Arnaud Kalimuendo, oo ka qalin jabiyay kuliyada dhalinyarada ee PGS, wali laguma arag fagaarayaasha mana uusan wali la ciyaarin naadigiisa amaah, laakiin intii lagu guda jiray labadii xilli ciyaareed ee ugu dambeeyay 2018-19 iyo 2019-20 wuxuu saxiixay 60 gool oo badankood waa horyaal.
CEEB CAS! Liverpool markii lixaad
Hadafyadan, wuxuu dhaliyey toban kulan oo Champions League ah oo loogu talagalay dhalinyarada.
Arnaud Kalimuendo oo u ciyaara kooxda PSG ayaa sheegay in uu doonayo in uu ku biiro kooxda PSG xagaaga soo socda. ) Arnaud Kalimuendo – PSG (Sawirada Gaarka ah)
19 jirkaan ayaa ka caawiyay kooxdiisa, Lens, amaah, inuu u aado heerka ugu sareeya, laakiin PSG ayaa horay uga taxaddartay inaysan la tartamin isaga oo intaa ku daray in qandaraaskiisa amaahda uusan u saamaxeynin inuu la tartamo.
Iyadoo afar sano ay uga harsan tahay heshiiskooda amaahda, PSG ayaa dooneysa inay mar kale qandaraaska u kordhiso.
Wuxuu dhashay Janaayo 1, 2002, wuxuu horey u jabiyay rikoorkii 70-sano ee Len.
axadle 9069 posts
release of the Senegalese vaccination marketing campaign